१४ वर्षीया बालिकाको बिहे गर्न ५० लाख खर्च ! नेताको घरमा ४० गाडीमा भारतबाट आए ३ सय जन्ती | Chautarikhabar
१४ वर्षीया बालिकाको बिहे गर्न ५० लाख खर्च ! नेताको घरमा ४० गाडीमा भारतबाट आए ३ सय जन्ती
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४	समय - ९:४२:१५
८ कात्तिक, काठमाडौं । फूलमाला र बत्तीले झिलिमिली भव्य मण्डप । छिमेकीदेखि टाढाटाढाका आफन्त । खानपिनका लागि विभिन्न थरी परिकार । लाहान, नयाँबजारका मोहम्मद ताहिर अन्सारीले छोरीको बिहेका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए । मात्र प्रतीक्षा थियो, जन्तीको । राति करिब ११ बजे जन्तीको लावालस्कर पनि आयो । ४० गाडीमा ३ सय जन्ती मण्डपमा भित्रिँदा बेहुलीका अभिभावकको अभिमानसमेत बढेको थियो ।
स्वागतसँगै जन्ती खानपिनमा लागे । अभिभावक निकाह (बिहे) को तयारीमा लागे । सम्पूर्ण रुपले सिँगारिएकी बेहुलीलाई कोठाबाट मण्डपतिर लगिँदै थियो । त्यही बेला फिल्मी शैलीमा यो बिहे हुन सक्दैन भन्दै प्रहरी पुग्यो । समारोहमा अचानक बिध्नज भएपछि सबैजना आत्तिए ।
प्रहरीले अभिभावकलाई सोधे – बेहुलीको उमेर कति हो ? अभिभावकले सुरुमा आनाकानी गरे पनि खुलासा गर्न बाध्य भए – बेहुलीको उमेर १४ वर्ष मात्रै छ ।’
उमेर नपुगेकी बालिकाको बिहे गर्न पाइँदैन, अभिभावक र साक्षीलाई समेत मुद्दा लाग्न भनेर प्रहरीले ठुल्ठूलो स्वरमा भन्न थालेपछि आफन्तहरुको भागाभाग भयो । बेहुलीपक्ष मात्र होइन, नाच्दैगाउँदै आएका जन्ती पनि तितरबितर हुन थाले । ५० लाख खर्च गरेर आयोजना गरिएको बिहे समारोहमा कोलाहल मच्चियो । तर, प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गरेन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक मा खबर छ ।
खड्कालाई मन्त्रालय तान्न आपूर्ती मन्त्री चन्दले किन आलटाल गरे